Created: 07 April 2018 | Hits: 778
Created: 29 September 2017 | Hits: 2244
ABC Tracking Platform သည် ဈေးကွက်ထဲရှိ သက်တန်းရင့် platform များကဲ့သို့ သမရိုးကျ Server များ၊ Software language များကို အသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကို အသုံးပြုထားသော Cloud Based platform တစ်ခု ဖြစ်သောကြောင့် သာမန်ထက်ပိုမိုလျင်မြန်သွက်လက်သော Web application, အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မျှမရရှိနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည် များကိုပါ ရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Read more: Car Tracker
CCTV Installation တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လို သူများ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Created: 13 December 2017 | Hits: 1515
Created: 29 September 2017 | Hits: 1734
အိမ်မှာ Internet ရှိတယ်ဆိုရင် ရုပ်ရှင်တွေ ၊ သီချင်းတွေ Youtube တွေ ကြိုက်သလောက် မိမိ TV ဖြင့် တနေကုန်ကြည့်လို့ အစဉ်ပြေစေပါတယ်။
🎞လုပ်ငန်းခွဲအများအပြား ရှိပါကလည်း ထိုလုပ်ငန်းအားလုံးတွင် တပ်ဆင်ထားသော CCTV Camera များကို တစ်နေရာထဲမှ လွယ်ကူစွာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
👨‍👦မိမိရင်သွေးများ ဖုန်းဖြင့် Youtube ကြည့်ရာမှ TV နှင့် Smart media box ကို ချိတ်ဆက်၍ ပြောင်းလဲကြည့်နိုင်ပါသည်။
📲 🖥 X96 Smart Media Boxများကို ဈေးနှုန်း ၅၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် လက်လီလက်ကား ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ( အရည်အသွေးအတွက် အာမခံသည် )
☎ ☎ 09450012695, 09260424045
Hikvission2MP ( 1080 P ) CCTV Camera ( ၄ ) 24,4000 Ks.
Created: 01 December 2017 | Hits: 3044
Read more: Hikvission2MP ( 1080 P ) CCTV Camera ( ၄ ) 24,4000 Ks.
Life Time Warranty ရယူနိုင်စေရန် အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း။
Created: 18 August 2017 | Hits: 1108
#CCTV တပ်ဆင်လိုသော Customer များအတွက် ကျွန်တော်တို့ ABC Info Tech မှ ဈေးနှုန်းချိုသာ၍ Quaility ကောင်းမွန်ပြီး Warranty ခိုင်မာသော ပစ္စည်းများကိုသာ ရောင်းချပေးနေပါသည်။ #Hikvision အမှတ်တံဆိပ် CCTV Camera များနှင့် DVR များကို 3Years Warranty ပေးပြီး ကျွန်တော်တို့တပ်ဆင်ပေးခဲ့သော Camera Services ကို Life Time Warranty ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ 🤗 ယခုလက်ရှိတွင် Camera တပ်ဆင်ပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်လိုသော အစိတ်အပိုင်းရှိလျှင် တပ်ဆင်ထားပေးသူအား ပြန်လည်ဆက်သွယ်မရတော့ခြင်း၊ Company ဖြတ်သိမ်းသွားခြင်းများ ဈေးကွက်တွင် Customer အများစု ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ 😒 ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် အခြား Company များမှတပ်ဆင်ထားသော Camera များကို ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းပေးနေရတဲ့ projet များစွာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ABC Info Tech အနေနဲ့ ထိုအခက်အခဲကို မရင်ဆိုင်ရရန် Customer များအပေါ် များစွာအလေးထား တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ 😇 😇 2001 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ထားသော ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီအပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လူကြီးမင်းလုပ်ငန်းကို အပ်နှံလိုက်ပါ။